ဒေါ်လာဈေးထပ်ကျရင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ထိခိုက်နိုင်
၀၇ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀
မကြာသေးခင်ကစလို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ထိခိုက်လာမှာ စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်း တင်ပြချင်ပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် ကိုဇော်ထက် က ရန်ကုန်ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ဒီနေ့ ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးဟာ ၁၃၇၁.၁ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပ ဘဏ်တွေမှာတော့ တဒေါ်လာကို ၁၃၆၀ ကျပ်လောက်သာ ဈေးပေါက်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ကြားဝင်ထိန်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ကြားက ဒေါ်လာဈေး တဖြည်းဖြည်းကျလာတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သင်တန်းကျောင်းတာဝန်ခံ ဦးသိန်းမြင့်ဝေကတော့ ငွေလဲနှုန်း ကျပ်ငွေ ၁၂၀၀ အောက်အထိ ကျဆင်းမသွားဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ အခုလက်ရှိကတော့ ဗဟိုဘဏ်က ဝင်ရောက်ထိန်းကြောင်းနေတာပဲပေါ့၊ ဒါကတော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အချက်ကလေးပေါ့။ အဲဒီလို ဝင်ရောက် ထိန်းကြောင်းပေးလို့လည်း ကျသင့်ကျထိုက်တာထက် ပိုမကျဘူးလို့လည်း မြင်တာပေါ့နော်၊ ပထမ တချက်ကတော့။ ဒုတိယက အဲလို ၁၂၀၀ ( ကျပ်) အောက် ရောက်သွားမယ်ဆို သိပ်မကြိုက်ဘူးပေါ့ ကျနော်တို့ အမြင်ကတော့။ ဒီ ၁၄၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ reasonable exchange rate ဖြစ်မယ်လို့တော့ မြင်တာပေါ့။”
ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာ ပို့ကုန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို လစာရှင်းတဲ့အခါမှာ ကျပ်ငွေလဲလှယ်ရသလို ၊ လစာတိုးပေးညှိနှိုင်းတာတွေလည်းရှိလို့ ဒေါ်လာဈေး ဆက်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ export ( ပို့ကုန်) structure ကတော့ ပြောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အထူးသဖြင့် သီလဝါ SEZ ပေါ့၊ ကျနော်တို့ အားကိုးစရာ။ သူတင်ပို့နိုင်သလိုပဲ ကျန်တဲ့ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာပေါ့ သူတို့တွေကလည်း ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကူးလူးချိတ်ဆက်တာတွေ များတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေ ပြောင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်ဗျ။ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ ခုနက ကျနော်တို့ အညွှန်းကိန်းတွေလည်း ပြောင်းလာတယ်ပေါ့။”
ဒေါ်လာဈေးကျလို့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိုးရိမ်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အညွှန်းကိန်းဟာ မေလထဲမှာ ၃၈.၉ ရှိနေရာကနေ ၄၈.၇ အထိ တိုးလာကြောင်း လန်ဒန်အခြေစိုက် စီးပွားရေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့ IHS Markit ရဲ့ ဇူလိုင် ၂ရက်က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို တိုးတက်လာတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကုန်သွယ်ရေးပညာရှင် ဦးသိန်းမြင့်ဝေက အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
“ ၁၃၀၀ အောက်ရောက်သွားရင်တော့ နည်းနည်းလေးတော့ ဒုက္ခတွေ့နိုင်တာပေါ့နော်၊ အဓိက COVID လည်းဖြစ်နေတယ်၊ အခုအလုပ်သမားတွေကလည်း လုပ်ခလစာ တိုးတောင်းနေတယ်၊ order ( ကုန်အမှာ) တွေကလည်း မငြိမ်ဘူး၊ ရတဲ့ order ကလည်း ပို့ဖို့က နည်းနည်းခက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာက အစအဆုံး ဘာမှမရှိနိုင်ဘူးလေ၊ ပိတ်ကအစ။ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး ဖြစ်လှချည်လို့ မပြောသေးပါဘူး၊ တာစူနေပြီပေါ့။ တည်ငြိမ်နေတဲ့ဟာလေး ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ တချို့ကိစ္စက ထိန်းလို့မရဘူးလေ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်မှာ ငွေရှိတဲ့အခါကျတော့ လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးရှိတာပေါ့။ ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ခင် အခြေအနေမှန်ကို သိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။”
မြန်မာကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အချက်အရဆိုရင် ၂၀၁၉ ကနေ ၂၀၂၀ ဧပြီလအထိ ပုံမှန်နဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပို့ကုန်နဲ့သွင်းကုန် နှစ်ခုပေါင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၆၅၁. ၄၂၇ သန်းဖိုး ကုန်သွယ်ထားပြီး သွင်းကုန်ကတော့ အနည်းငယ်ပိုများနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မကွာသေးခငျကစလို့ အမရေိကနျ ဒျေါလာနဲ့ မွနျမာကပျြငှလေဲနှုနျး ကဆြငျးလာနတေဲ့အတှကျ ကုနျထုတျလုပျငနျးတှမှော ထိခိုကျလာမှာ စိုးရိမျမှုတှေ ထှကျပျေါလာနတေဲ့အကွောငျး တငျပွခငျြပါတယျ။ VOA သတငျးထောကျ ကိုဇျောထကျ က ရနျကုနျကနေ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ ဗဟိုဘဏျရဲ့ ဒီနေ့ ဒျေါလာနဲ့ကပျြငှေ လဲလှယျနှုနျး ရညျညှနျးတနျဖိုးဟာ ၁၃၇၁.၁ ကပျြဖွဈပွီး ပွငျပ ဘဏျတှမှောတော့ တဒျေါလာကို ၁၃၆၀ ကပျြလောကျသာ ဈေးပေါကျပါတယျ။ ဗဟိုဘဏျက ကွားဝငျထိနျးဖို့ ကွိုးပမျးနတေဲ့ ကွားက ဒျေါလာဈေး တဖွညျးဖွညျးကလြာတဲ့ အပျေါမှာတော့ ပွညျတှငျး ကုနျထုတျလုပျငနျးရှငျတှေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ ကုနျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန သငျတနျးကြောငျးတာဝနျခံ ဦးသိနျးမွငျ့ဝကေတော့ ငှလေဲနှုနျး ကပျြငှေ ၁၂၀၀ အောကျအထိ ကဆြငျးမသှားဖို့ မြှျောလငျ့ကွောငျး ပွောပါတယျ။
“ အခုလကျရှိကတော့ ဗဟိုဘဏျက ဝငျရောကျထိနျးကွောငျးနတောပဲပေါ့၊ ဒါကတော့ သိသာထငျရှားတဲ့ အခကျြကလေးပေါ့။ အဲဒီလို ဝငျရောကျ ထိနျးကွောငျးပေးလို့လညျး ကသြငျ့ကထြိုကျတာထကျ ပိုမကဘြူးလို့လညျး မွငျတာပေါ့နျော၊ ပထမ တခကျြကတော့။ ဒုတိယက အဲလို ၁၂၀၀ ( ကပျြ) အောကျ ရောကျသှားမယျဆို သိပျမကွိုကျဘူးပေါ့ ကနြျောတို့ အမွငျကတော့။ ဒီ ၁၄၀၀ ပတျဝနျးကငျြလောကျကတော့ reasonable exchange rate ဖွဈမယျလို့တော့ မွငျတာပေါ့။”
ပွညျတှငျး ကုနျထုတျလုပျငနျးတှေ အထူးသဖွငျ့ အထညျခြုပျလုပျငနျးတှဟော ပို့ကုနျအတှကျ အမရေိကနျဒျေါလာနဲ့ရပွီး ဝနျထမျးတှကေို လစာရှငျးတဲ့အခါမှာ ကပျြငှလေဲလှယျရသလို ၊ လစာတိုးပေးညှိနှိုငျးတာတှလေညျးရှိလို့ ဒျေါလာဈေး ဆကျကမြယျဆိုရငျတော့ ကုနျထုတျလုပျငနျးတှအေတှကျ အဆငျပွမှော မဟုတျဘူးလို့ ရှလေငျပနျးစကျမှုဇုံ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးသောငျးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ ကနြျောတို့ နိုငျငံရဲ့ export ( ပို့ကုနျ) structure ကတော့ ပွောငျးတာပေါ့ဗြာ။ အထူးသဖွငျ့ သီလဝါ SEZ ပေါ့၊ ကနြျောတို့ အားကိုးစရာ။ သူတငျပို့နိုငျသလိုပဲ ကနျြတဲ့ လှိုငျသာယာ၊ ရှပွေညျသာပေါ့ သူတို့တှကေလညျး ကနျြတဲ့ နိုငျငံတှနေဲ့ ကူးလူးခြိတျဆကျတာတှေ မြားတဲ့ အခါကတြော့ ကနြျောတို့ ထုတျလုပျမှုပုံစံတှေ ပွောငျးလာတာကို တှရေ့ပါတယျဗြ။ ပွောငျးလာတာနဲ့အမြှ ခုနက ကနြျောတို့ အညှနျးကိနျးတှလေညျး ပွောငျးလာတယျပေါ့။”
ဒျေါလာဈေးကလြို့ ပို့ကုနျလုပျငနျးရှငျတှေ စိုးရိမျနတေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကုနျထုတျလုပျမှု အညှနျးကိနျးဟာ မလေထဲမှာ ၃၈.၉ ရှိနရောကနေ ၄၈.၇ အထိ တိုးလာကွောငျး လနျဒနျအခွစေိုကျ စီးပှားရေးအကဲဖွတျအဖှဲ့ IHS Markit ရဲ့ ဇူလိုငျ ၂ရကျက ထုတျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒီလို တိုးတကျလာတဲ့ အကွောငျးရငျးနဲ့ ပတျသကျလို့တော့ ကုနျသှယျရေးပညာရှငျ ဦးသိနျးမွငျ့ဝကေ အခုလို သုံးသပျပါတယျ။
“ ၁၃၀၀ အောကျရောကျသှားရငျတော့ နညျးနညျးလေးတော့ ဒုက်ခတှနေို့ငျတာပေါ့နျော၊ အဓိက COVID လညျးဖွဈနတေယျ၊ အခုအလုပျသမားတှကေလညျး လုပျခလစာ တိုးတောငျးနတေယျ၊ order ( ကုနျအမှာ) တှကေလညျး မငွိမျဘူး၊ ရတဲ့ order ကလညျး ပို့ဖို့က နညျးနညျးခကျနတေယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့ ဆီမှာက အစအဆုံး ဘာမှမရှိနိုငျဘူးလေ၊ ပိတျကအစ။ ဆိုးဆိုးရှားရှားကွီး ဖွဈလှခညျြလို့ မပွောသေးပါဘူး၊ တာစူနပွေီပေါ့။ တညျငွိမျနတေဲ့ဟာလေး ဖွဈရငျ ပိုကောငျးတာပေါ့။ တခြို့ကိစ်စက ထိနျးလို့မရဘူးလေ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံတျောမှာ ငှရှေိတဲ့အခါကတြော့ လုပျလို့ရတာတှေ အမြားကွီးရှိတာပေါ့။ ဆိုးဆိုးရှားရှားမဖွဈခငျ အခွအေနမှေနျကို သိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။”
မွနျမာကုနျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန အခကျြအရဆိုရငျ ၂၀၁၉ ကနေ ၂၀၂၀ ဧပွီလအထိ ပုံမှနျနဲ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး ပို့ကုနျနဲ့သှငျးကုနျ နှဈခုပေါငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၆၅၁. ၄၂၇ သနျးဖိုး ကုနျသှယျထားပွီး သှငျးကုနျကတော့ အနညျးငယျပိုမြားနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေး အပေါ် Coronavirus ရဲ့ဂယက်
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း နေ့စဉ် ကျဆင်းလာ
ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းမှု မြန်မာဘဏ်တွေ အ၀ယ်ပိတ်
မြန်မာငွေလဲနှုန်း ဘာကြောင့် ကျရသလဲ
ဒေါ်လာဈေး တရက်အတွင်းမှာ စံချိန်တင်ဈေးတက်
ဒေါ်လာ ငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူအချို့ ဖမ်းဆီးခံရ
တရုတ်နဲ့ ဂျပန်ငွေကြေး ကုန်သွယ်ငွေပေးချေရန် ခွင့်ပြု